DEG DEG: Al-Shabaab Oo Gowracay Taliyihii Ciidammada Galmudug+15 Qof ku dishay dagaal aad u Qaraar | Afrikada
DEG DEG: Al-Shabaab Oo Gowracay Taliyihii Ciidammada Galmudug+15 Qof ku dishay dagaal aad u Qaraar
Afrikada, Cadaado: Warar aynu ka helayno dagaallo aad u ba’an oo saaka aroortii ka dhacay degaanka Caad oo u dhexeeya magaalooyinka Cadaado iyo Xarardheere.
Dagaalkan ayaa dhacay saaka aroortii waxaana wararku sheegayaan in si aad u xun jilbaha dhulka la isugu dhigay iyadoo la isweydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Degaanka dagaalku ka dhacay ayaa 50 KM u jira magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug.
Meydadka 15 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Galmudug ayaa la sheegay in lagu arkay iyaga oo daadsan gudaha deegaanka Caad, waxaana wararka qaar ay sheegayaan in dadka deggan degaanka Caad ay diideen in ay la shaqeeyaan kooxaha Al-Shabaab taasi oo keentay in hilfaha la isku qaado oo meeshaasi uu dhib weyn ka dhaco.
Kooxaha A-Shabaab ayaa si gaadmo ah weerarka ugu harqiyey degaanka Caad waxaana Shabaabku ay dhowr jeer hore ugu amreen dadka degaanka in ay carruurtooda ka soo xaadiriyaan dugsiyada Al-Shabaabku wax ka dhigaan.
Dhibka degaannadani ka dhacay ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay si xun u hareereeyeen maleeshiyaadkii Galmudug ee degaannadaasi ku sugnaa kuwaasi oo isgaarsiinta laga jaray goor hore aroortii.
READ MORE: Shiinaha oo u yeeray safiirka Kanada ee fadhiya caasimadda Shanghai
Ciidmmada Galmudug ayaa 15 laga dilay waxaana goobtu weli tahay mid colaadi ka taagan tahay.
Galmudug ayaan aheyn maamul si aad ah isaga difaaca kooxaha mintidiinta tani oo keentay in degaannada Al-Shabaabku ay yihiin kuwo kooban. Dadka degaankuna si aad ah uma aaminsana mabaadi’da kooxaha Al-Shabaab.